मुटु स्वस्थ राख्न कति व्यायाम आवश्यक छ? :: Setopati
मुटु स्वस्थ राख्न कति व्यायाम आवश्यक छ?
द न्यूयोर्क टाइम्स चैत १२
के तपाईं आफ्नो मुटु स्वस्थ राख्न चाहनुहुन्छ? उसो भए जतिसक्दो धेरै व्यायाम गर्नुस्।
हालैको एक अध्ययनअनुसार तपाईंले जति धेरै व्यायाम गर्नुभयो, मुटु उति स्वस्थ रहनेछ। शारीरिक व्यायाम र मुटु रोगको सम्बन्धमाथि गरिएको उक्त अध्ययनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
जो व्यक्ति निरन्तर सक्रिय रहन्छ, उसलाई मुटु रोग लाग्ने सम्भावना निष्क्रिय बस्नेका तुलनामा एकदमै कम हुने अध्ययनले देखाएको छ।
बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक टेरेन्स ड्वर र उनको टिमले गरेको उक्त अध्ययनमा ९० हजार वयस्क व्यक्ति समावेश थिए।
हुन त शारीरिक रूपमा सक्रिय मान्छेको मुटु बलियो हुन्छ भन्ने हामीले धेरै वर्षपहिल्यै थाहा पाएका हौं। सन् १९४० दशकको अन्ततिर बेलायतका महामारी विशेषज्ञ जेरेमी मोरिसनले यसबारे बलियो प्रमाण पेस गरेका थिए।
उनले बेलायतका बस कन्डक्टर र चालकहरूबीच अध्ययन गरेर के निष्कर्ष निकाले भने, कन्डक्टरहरू दिनभर उभिने र बसबाट ओर्लिने-चढ्ने गरिरहँदा शारीरिक रूपले सक्रिय रहन्छन्, जसले उनीहरूमा मुटुरोगको सम्भावना दिनभर बसिरहने चालकको तुलनामा आधाभन्दा कम हुन्छ।
त्यसयता अनगिन्ती अध्ययनले शारीरिक सक्रियता र मुटुको समस्याबारे सम्बन्धहरू केलाइसके। ती सबैजसो अध्ययनले जति धेरै सक्रियता भयो, मुटुको समस्या उति कम हुने देखाएका छन्। केहीले भने फरक नतिजा पनि निकालेका थिए। मान्छेको अति धेरै सक्रियताले मुटुलाई हानि पुर्‍याउने वा कमजोर बनाउने केही अनुसन्धाताको निष्कर्ष थियो। तर यस्तो निष्कर्ष निकाल्ने अध्ययन एकदमै सानो समूह वा निश्चित क्षेत्रका थोरै व्यक्तिमा भएका थिए, जस्तै पुरुष एथलेटहरू।
धेरै मान्छेमा गरिएका अध्ययनको नतिजा पनि कहिलेकाहीँ तलमाथि हुन सक्छ। सहभागीले आफ्नो व्यवहारबारे बताउने कुरा सम्झनाका आधारमा भन्ने हुँदा सधैं शतप्रतिशत सही नहुन सक्छ। त्यसैले मुटुको स्वास्थ्य र व्यायामबीचको सम्बन्धबारे केही कुरा अझै अस्पष्ट नै छन्।
के हामी मुटु स्वस्थ राख्न धेरै व्यायाम गर्न सक्छौं? के महिला र पुरुष दुवैलाई उत्ति नै व्यायाम आवश्यक पर्छ? खासमा हामीले दिनमा कति व्यायाम वा सक्रिय रहन जरूरी छ?
यस्ता प्रश्नमा ध्यान दिँदै अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका महामारी विज्ञान प्राध्यापक डाक्टर टेरेन्स ड्वर र उनका सहकर्मीले नयाँ अध्ययन गरेका हुन्। मान्छेको मुटु र जीवनशैलीबीच सम्बन्धबारे लामो समयदेखि अनुसन्धान गर्दै आएका टेरेन्सले यी प्रश्नको जवाफ युके बायोबैंकमा खोजेका थिए।
युके बायोबैंक भनेको बेलायतका पाँच लाखभन्दा बढी वयस्क महिला र पुरुषको स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्यांकको संग्रह हो। उनीहरूले सन् २००६ को सुरूआतमा अध्ययन निम्ति आफ्नो रगत, थुक र पिसाबको नमूना दिएका थिए। त्यस्तै, जीवनशैलीबारे सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुका साथै आफ्नो पूरा शरीर पनि जचाएका थिए। तीमध्ये एक लाखभन्दा बढी सहभागीले आफ्ना गतिविधिको विवरण राख्ने ट्रयाकर लगाए र नियमित मापन पनि गरे।
डा. टेरेन्स र उनका सहकर्मीले ट्रयाकर लगाएर नियमित अपडेट गरेका महिला र पुरुषको शारीरिक सक्रियताको तथ्यांक संकलन गरे। ती सहभागीमध्ये कुन-कुन बेला को-को अस्पताल भर्ना भए, उनीहरूलाई के-कस्तो रोग लाग्यो र कसको के कारणले मृत्यु भयो भन्ने सूचना पनि केलाए।
यसबाट एउटा कुरा पत्ता लाग्यो- जो सक्रिय छन्, उनीहरूलाई मुटु रोग लाग्ने सम्भावना कम छ।
डाक्टर टेरेन्सको यो अध्ययनले मुटु र व्यायामबीचको बलियो सम्बन्ध थप पुष्टि गरेको छ। तर मुटु स्वस्थ राख्ने नाममा एकैपटक अति धेरै व्यायाम गर्न नहुने चिकित्सकहरूले सुझाएका छन्। व्यायामको मात्रा शरीरलाई सहज हुने गरी विस्तारै बढाउँदै लैजानुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
अध्ययनमा दसौं हजार मानिसका विवरण संकलन गरी उनीहरूको दैनिकी विश्लेषण गरिएको थियो। त्यसमा असाध्यै कम हलचल गर्ने मानिसहरू युवावस्थामै मृत्युको शिकार हुने उच्च जोखिममा रहेको देखिएको थियो। तर, त्यस्ता मानिस पनि जुरुक्क उठेर हिँड्न थाल्ने हो भने त्यस्तो खतरा पुनः घट्दै जाने रहेछ। त्यसनिम्ति फेरि असाध्यै हिँडडुल गर्नुपर्ने पनि होइन।
हामीमध्ये धेरैको गतिविधि यति बेला स्थिर छ। यसका पनि दुइटा मुख्य कारण छन्।
एक त संसारभर हामी कोरोनासँग जोडिएका सावधानी अपनाउँदा धेरै हिँडडुल बन्द गरेर आफूलाई एकैठाउँ खुम्च्याउन बाध्य छौं। अर्को, अहिले संसारभर उत्तरी गोलार्द्धमा चलिरहेको जाडो महिनाले मानिसको सक्रियता सुस्त भएको छ।
मानिसका चालचलनबारे हालै गरिएका सर्भेहरूमा महामारी प्रकोपसँगै धेरैले एक वर्षअगाडिको तुलनामा आफ्नो सक्रियता घटाएर एकैठाउँ बसेको बस्यै गर्न थालेको देखिएको छ।
यो शारीरिक गतिहिनताले दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या पैदा गर्नेछ भन्नेमा कुनै शंका छैन। महामारीबारे अध्ययन गरेका थुप्रै विज्ञले यसरी बसेको बस्यै गर्ने प्रवृत्ति र मृत्युको आपसी सम्बन्ध केलाएका थिए। त्यो अध्ययनले सक्रियभन्दा सोफासेटमा बसेरै समय काट्ने मानिसहरू चाँडै मृत्युको मुखमा पुग्ने देखाएको थियो।
मानौं तपाईं दिनको आठ घन्टा कुर्सीमा बसेर कार्यालयको काम गर्नुहुन्छ। तपाईं बेलुकीपख आधा घन्टाजति हिँडडुल गर्ने हो भने त्यसले दिनभरमा कुल ३० मिनेट हिँड्नैपर्ने आवश्यकता परिपूर्ति गरिदिन सक्छ।
यसबारे पहिले नै गरिएका केही अध्ययनले 'हुँदैन' भनेको थियो।
सन् २०१६ मा दस लाख मानिसमा एउटा यस्तै अध्ययन गरिएको थियो। त्यो अध्ययनमा महिला वा पुरुषले दिनमा करिब ६० देखि ७५ मिनेट मात्रै व्यायाम गर्दा बाँकी समय बसेको बस्यै हुँदाका समस्या मेटिने देखाएको थियो।
उक्त अध्ययन क्रममा मान्छेलाई उनीहरू कतिबेर बसे वा हिँडडुल गरे भनेर सोधिएको थियो। अध्ययनमा यो मात्र सोध्नुले समस्या निम्त्याउन सक्छ। किनकी आफ्नो जीवनको सक्रियता बढाइचढाइँ सुनाउनु र बसाइलाई धेरै प्राथमिकता नदिनु अधिकांश मान्छेको स्वभाव हुन्छ। अध्ययनमा समावेश भएकाहरूले भरपर्दो जवाफ नदिने सम्भावना धेरै हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा उनीहरूमा व्यायामको प्रभाव सही आकलन हुँदैन। मानौं कोही आठ घन्टा बसिरहन्छ तर उसले म पाँच घन्टा बस्छु र तीन घन्टा हिँड्छु भनिदियो भने उसलाई थोरै व्यायाम गर्न भनिन्छ। जबकि हामीले बुझेसम्म उसलाई धेरै व्यायाम आवश्यक पर्छ।
यो अध्ययनमा भने सहभागीहरूले भनेकै कुरा विश्वास गरियो। बसेरै धेरै समय बिताउनेलाई पनि थोरै व्यायाम गर्न भनियो। अचम्म के भइदियो भने, थोरै व्यायामले पनि उसलाई फाइदा पुर्‍यायो।
यसबीच गत साता ब्रिटिस जर्नल अफ स्पोर्ट्स मेडिसिनमा सार्वजनिक नयाँ अध्ययनले विश्व स्वास्थ्य संगठनको शारीरिक सक्रियताका लागि परिमार्जित निर्देशिका र सन् २०१६ को अध्ययनसँग तालमेल मिल्ने गरी नतिजा प्रकाशित गरेको छ।
सन् २०१६ मा यस्तो अध्ययन गर्दा पुरानै तथ्यांकमा बढी भर परिएको थियो। यसपालि बढीभन्दा बढी मानिससँग भेटेर उनीहरूको सक्रियता वा निष्क्रियताबारे सोधपुछ गरियो।
पछिल्लो समय नौवटा विभिन्न अध्ययनमा समावेश मानिससँग वैज्ञानिकहरूले सोधपुछ गरेका थिए। तीमध्ये ५० हजार महिला र पुरुषले आफ्ना हिँडडुलको मात्रा नाप्ने उपकरण प्रयोग गरेको पाइयो। हिजोआज यस्ता उपकरण मोबाइलमै पनि उपलब्ध छन्।
यी अध्ययनमा युरोप वा अमेरिकाका अधवैंशे वा बढी उमेरका मानिस समावेश थिए। ती नौवटै अध्ययनका तथ्यांक राखेर हेर्दा बढीजसो मानिस बसेरै झन्डै दस घन्टा बिताउने भेटिए। त्यस्तै धेरै मानिस विरलै हिँड्ने र एकाध मिनेट व्यायाम गर्नेहरू पाइए।
यसरी तथ्यांक संकलन गरिएको झन्डै एक दशकपछि अध्येताहरूले मृत्यु दर्ताको सूची हेरे। मान्छेको सक्रियताअनुसारै उनीहरूलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरियो।
- एकदमै थोरै वा हिँड्दै नहिँड्ने
- थोरै बस्ने, धेरै सक्रिय हुने
जो असाध्यै थोरै हलचल गर्थे ती कम उमेरमै मृत्युको उच्च जोखिममा रहेछन्। बसेरै दिन काट्नेको उमेर नपुग्दै मृत्यु हुने सम्भावना थोरै बस्ने र धेरै सक्रिय हुनेको तुलनामा २६० प्रतिशत बढी देखियो। यो अध्ययन क्रममा स्वयंसेवीहरूलाई उनीहरूको उमेरमा असर पार्ने अन्य कारक, धूमपान र अत्यन्त धेरै तौलजस्ता कुरा नियन्त्रण गर्न लगाइएको थियो।
यी सारा विवरणलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँदै अध्येताहरूले एउटा यस्तो विन्दु पहिल्याए, जसले शारीरिक गतिविधि र दीर्घायुबीच सम्बन्ध बुझ्न व्यायामको सजिलो मात्रा पेस गर्थ्यो- दिनको लगभग ३५ मिनेट फटाफट हिँड्ने वा करिब ११ मिनेट व्यायाम गर्ने।
यति हुँदाहुँदै यसैमा भर परेर व्यायाम गर्ने मानिस अल्पायुमा मर्दै मर्दैनन् भन्नु अर्को गल्ती हुनेछ। यो अध्ययनले साबित गरेको चाहिँ मानिसको शारीरिक गतिविधि, बसाइ र मृत्युको कारण आपसमा अन्तरसम्बन्धित छ भन्ने मात्रै हो।
'यो सबको उद्देश्य धेरै समय बसेरै बिताउनुभन्दा जुरुक्क उठेर एकछिन हिँडडुल पनि गरौं भन्ने नै हो,' पछिल्लो अध्ययनका नेतृत्वकर्ता एवं ओस्लोस्थित नर्वेजियन स्कुल अफ स्पोर्ट साइन्सेजका प्राध्यापक उल्फ इयकिलुण्ड भन्छन्, 'एकछिन फटाफट हिँड्नु मध्यम स्तरका हिसाबले सबभन्दा उत्कृष्ट व्यायाम हो।'
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत १२, २०७७, १५:१४:००